Habka xisaabinta isticmaalka dunta tolidda
Qaabka loo xisaabiyo qadarka dunta tolidda. Kordhinta qiimaha alaabta ceeriin ee dharka, qiimaha dunta tolidda, gaar ahaan dunta dhamaadka tolidda sare, ayaa sidoo kale kor u kacaysa. Si kastaba ha noqotee, hababka hadda jira ee loo xisaabiyo qadarka dunta tolidda ee ay isticmaalaan shirkadaha dharka ayaa badanaa lagu qiyaasaa iyadoo lagu saleynayo khibradda soo-saarka. Shirkadaha badankood badiyaa waxay ku badiyaan dunta tolidda, waxay furaan sahayda, mana ogaadaan qiimaha maaraynta dunta tolidda.
1. Habka xisaabinta ee isticmaalka dunta tolidda
Xisaabinta xaddiga dunta tolidda waxaa lagu helaa habka qiyaasta guud ee loo isticmaalo shirkadaha, taas oo ah, dhererka xariiqda tolida waxaa lagu cabiraa barnaamijka CAD, wadarta dhererka waxaa lagu dhuftaa isugeyn (guud ahaan 2.5 illaa 3 jeer) wadarta dhererka tolida).
Gabal cunno cunid tolid = wadarta isticmaalka tolmada dhammaan qaybaha dharka × (1 + heerka isku dhejinta).
Qaabka qiyaasta si sax ah uma heli karo qadarka dunta tolidda. Waxaa jira laba hab oo cilmiyaysan oo lagu xisaabiyo qadarka dunta tolidda:
1. Qaaciddada caanaha
Mabda 'habka qaaciddada waa in loo adeegsado habka dhererka qalooca joomatari ee xisaabta qaabdhismeedka tolidda, taas oo ah, in la ilaaliyo qaabka joomatari ee isku-xidhka isku-xidhka alaabta tolidda, iyo in la isticmaalo qaaciddada joomatari si loo xisaabiyo isticmaalka a khadka loop.
Xisaabi dhererka wareegga wareegga (oo ay ku jiraan dhererka wareegga wareegga + xaddiga xargaha loo adeegsaday isgoyska tolida), ka dibna u beddelo xaddiga tolkiiba halkii mitir tolmo, ka dibna ku dhufo dhererka guud ee tolida dharka.
Qaabka qaaciddada wuxuu isku daraa arrimo sida cufnaanta tolida, dhumucda walxaha tolidda, tirinta dunta, ballaca dillaaca dhererka, iyo dhererka tolida Sidaa darteed, habka qaaciddada waa qaab ka saxsan, laakiin way adag tahay in la isticmaalo. Qeexitaannada, qaababka, farsamooyinka tolida, dhumucda walxaha tolida (maro cawl), tirinta dunta, cufnaanta tolida, iwm aad ayey u kala duwan yihiin, taas oo keeneysa culeys aad u badan xagga xisaabinta, sidaas darteed shirkaduhu asal ahaan ma isticmaalaan.
2. Saamiga dhererka tolida
Qiyaasta dhererka xariiqda xariiqda, taas oo ah, saamiga dhererka tolida tolida tolida ilaa dhererka tolida la cunay. Saamigan waxaa lagu go'aamin karaa iyadoo loo eegayo wax soo saarka dhabta ah ama loo xisaabinayo habka qaaciddada. Waxaa jira laba hab oo tijaabo ah: habka dhererka tolida iyo habka dhererka tolida.
Habka hagaajinta dhererka tolmada: Kahor tolida, ku cabbir dherer cayiman oo xariiq ah pagoda oo calaamadee midabka. Tolitaanka ka dib, cabir tirada tollooyinka lagu sameeyay dhererkan si loo xisaabiyo dhererka tolida halkii mitir. Isticmaalka khadka raadadka.
Habka dhererka tolida: marka hore isticmaal qalabka wax lagu tolo ee dhumucda kala duwan si loo tolo, ka dibna u jar qaybta leh qaab tolmo wanaagsan, si taxaddar leh u kala fur tolida, cabir dhererkooda ama culeyskooda culeys, ka dibna xisaabi Qadarka dunta loo adeegsaday halkii mitir tola (dherer ama miisaan).
2. Muhiimadda xisaabinta saxda ah ee qiyaasta:
(1) Tirada dunta tolidda ee la adeegsaday ayaa ah qodob muhiim u ah shirkadaha si ay u xisaabiyaan qiimaha wax soo saarka dharka;
(2) Xisaabinta xaddiga dunta tolidda ee la istcimaalay waxay yareyn kartaa qashinka iyo dib u dhaca tolalka. Yaraynta qadarka dunta tolidda waxay badbaadin kartaa aagaga alaabada shirkadda waxayna yareyn kartaa cadaadiska alaabada, taas oo yareyneysa kharashaadka wax soo saarka iyo kordhinta heerka faa'iidada;
(3) Fulinta qiimaynta isticmaalka dunta tolidda waxay hagaajin kartaa wacyiga shaqaalaha ee tilmaamaha tolida iyo tayada;
(4) Marka la xisaabiyo qadarka dunta tolidda, shaqaalaha waxaa lagu xusuusin karaa inay beddelaan dunta waqtiga. Marka tolida aan loo oggolayn tolmada furan sida jiiniska, xaddiga miiqda la isticmaalay waa in si taxaddar leh loo xisaabiyaa si loo yareeyo dheellitirka tolnimada ee ay keeneen tolmo aan kugu filnayn, taas oo kor u qaadaysa Waxsoosaarka;
Sababtoo ah "saamiga dhererka tolida-ilaa-khadka" waa mid iska fudud oo lagu xisaabiyo qadarka dunta tolidda, natiijada xisaabintuna waa sax, waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa soosaarayaasha dharka.
3. Waxyaabaha saameeya qadarka dunta tolidda
Qadarka isticmaalka dunta tolidda kaliya kuma xirna dhererka tolida, laakiin sidoo kale wuxuu si dhow ula xiriiraa arrimo ay ka mid yihiin dhumucda iyo qalloocinta dunta tolidda lafteeda, qaab dhismeedka iyo dhumucda dharka, iyo cufnaanta tolida inta lagu guda jiro hawsha tolidda .
Si kastaba ha noqotee, isbeddelka dhabta ah iyo dabacsanaanta ayaa ka dhigaysa natiijooyinka xisaabinta ee dunta tolidda leh leexasho ballaaran. Waxyaabaha kale ee saameynta weyn leh waa:
1. Dabacsanaanta dharka iyo dunta: Wax tolidda iyo tolidda labaduba waxay leeyihiin heer dabacsanaan ah. Markay sii weynaato isbeddelka laastikada, ayaa saamayn weyn ku yeelanaysa xisaabinta xaddiga tolalka. Si natiijooyinka xisaabinta looga dhigo mid sax ah, waxaa lagama maarmaan ah in lagu daro isbarbardhigyada wax hagaajinta ee loogu talagalay hagaajinta dharka qafiifka ah iyo kuwa khafiifka ah oo leh qaabdhismeedyo urureed oo gaar ah iyo tolmo qalab gaar ah.
2. Soo Saarid: Marka laga hadlayo mug ballaaran oo wax soo saar, iyadoo aqoonta shaqaaluhu si tartiib tartiib ah u kordhayso, saamiga khasaaruhu xoogaa wuu yaraan doonaa.
3. Dhameystirka: Dhaqida iyo kaawaynta dharka ama dharka ayaa sababi doona dhibaatooyin ku soo yaraanaya dharka, kuwaas oo u baahan in la kordhiyo ama loo yareeyo si ku habboon.
4. Shaqaalaha: Habka loo adeegsado tolidda dharka, iyadoo ay ugu wacan tahay caadooyinka kala duwan ee ay ku shaqeeyaan shaqaaluhu, khaladaadka iyo isticmaalka dadka ayaa sababa. Isticmaalka waxaa lagu go'aamiyaa iyadoo loo eegayo heerka farsamo iyo waaya aragnimada dhabta ah ee warshadda, qashinkaasna waa lagu yareyn karaa iyadoo la raacayo hagitaanka hawlgalka saxda ah.
Tartanka ka socda warshadaha dharka ayaa sii xoogaysanaya. Shirkaduhu waa inay lahaadaan habka xisaabinta dunta tolidda ee ku habboon si ay uga caawiso maareynta dunta tolidda iyo inay bixiso tixraac ku saabsan keydinta kharashyada wax soo saarka.